Puntland oo sheegtay in maamulka Somaliland ay dhibbaato balaaran ka geysteen Laascaanood, lagana xoreyn doono - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo sheegtay in maamulka Somaliland ay dhibbaato balaaran ka geysteen Laascaanood, lagana xoreyn doono
May 30, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa sheegtay in dhibbaato balaaran ay ka jirto magaalada Laascaanood ee gobolka Sool.
“Degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa hadda waxaa ka socda caburin, xarig iyo jirdil aan la aqbali karin oo loo geysanayo hooyooyinka, arday iyo shacab nugul oo aan waxba galabsan, waxaana hadda ku jira xabsiyada iyo garoomada lagu ciyaaro kubada cagta boqolaal qof oo ah dad shacab ah oo lagala soo baxay guryahoodii, sidoo kale waxaa yaala isbitaalada degmada Laascaanood shacab aad u badan oo lala dhacay rasaas nool oo hadda la tabaalaysan dhibbaatadii loo geystay, qaarkoodna u geeriyoodeen dhaawacyadii loo geystay,” ayaa Puntland ku tiri bayaan soo baxay maanta oo Arbaco ah.
Puntland ayaa sheegtay in dhibaatadaas ka dhacday Laascaano ay geysteen maamulka Somaliland ee uu hoggaamiyo Muuse Biix, lagana xoreyn doono.
“Dowladda Puntland waxay mar kale ku celinaysaa in maamulka Hargeysa uu masuul ka noqon doono dhammaan wixii soo gaaray shacabka ee kala ah dhimasho, dhaawac iyo xarig, waana lagula xisaabtami doonaa maamulkaas wax-yeelaynta joogtada ah ee uu ku hayo shacabka kunool degmada Laascaano,”
“Puntland waxay u sheegaysaa shacabka gobolka Sool in Puntland aysan ku eegan doonin xasuuqa iyo dhibaatada lagu hayo, ayna Puntland xoreyn doonto shacabkeeda ku sugan Laascaanood.” ayaa lagu sii yiri bayaanka.
Somaliland ayaa gacanta ku heysay Laascaano oo ah xarunta gobolka Sool tan iyo sanadkii 2007-dii.